SIDA LOO KOBCIYO XIRFADLAHA BEERTAADA - XAKAMAYNTA CAYAYAANKA
Xogta ugu weyn ee daryeelka caafimaadka xirfadeed
Cuntooyinka beerta waa beer khudradeed ah oo qaabeynaya geed cufan. The afkoda dhirta ee bilowga xilliga daaqsinka toosan, ka dibna waxay dhacaan. Caleemaha waxay gaari karaan ilaa 21 cm Cagaarka Tradescantia sida caadiga ah ubaxyo buluug ama midab buluug ah, kuwaas oo si deg-deg ah u lumay. Ubaxa wuxuu u muuqdaa mid si caadi ah u egyahay sida ugu dhaqsiyaha badan kuwii hore. Waqtiga ubaxu waa xagaaga.
Ma taqaanaa?Warshadu waxay ku leedahay sumcaddeeda Anderson, oo ah khabiir caan ah oo Maraykan ah, kaas oo sanado badan ka qaybqaatay daraasadda tiknoolajiyada iyo sidoo kale abuuray Beelo ku salaysan.
Magaca caadiga ah waa Anderson Tradescantia. Beelaha ayaa ku kala duwan dhererka baadiyaha (laga bilaabo 30 illaa 50 cm), iyo sidoo kale midabka caleemaha (cawl, guduud ama midab jaalle ah), iyo sidoo kale cabbirka iyo midabka.
Doorashada meel loogu beero beerashada ganacsiga beerta
Iyada oo ah meel loo dego ayaa ugu fiican in la doorto aag aan cadceeda ahayn. Waxaa ugu fiican dhamaanteed Tradescantia, hooska qayb ahaan iyo jiritaanka kaydka beerta ku qaban doonaa. Ciidda farsamoyaqaannada waa inay ahaato mid bacrin ah, iftiin iyo waxoogaa acidic ah. Ubax ee dhirta waa muddo gaaban, sidaas darteed hooska wuxuu noqon doonaa fursado aad u fiican ee soo degaya iyo koritaanka dheeraad ah.
Waa muhiim! Abaarta ayaa sababi doonta dhimashada geedka.
Tradescantia ee xaaladaha abaarta ayaa joojin doona ubaxyada waxayna u baahan doonaan buufin joogto ah. Hababka noocan oo kale ah ayaa si fiican loo qabtaa fiidkii.
Beerta Tradescantia ee qaabeynta muuqaalka
Beerta Tradescantia ayaa si ballaaran loo isticmaalaa nashqadda muuqaalka. Iyada oo laga caawinayo Tradescantia, waxaad abuuri kartaa qoraallo aad u tayo badan. Warshadu waa mid kala duwan, sidaa darteed waxaad ka soo qaadan kartaa isku-dar aan caadi ahayn oo ay ku jiraan ferns, gravilates, dabaasha, iris ama maalinle ah. Waxaa sidoo kale lagu beeray anemone, geyre, marigold, noocyo yar oo marti ah, astilbe, naqshadaha, sedegyo kala duwan, medunitsami. Dhirta noocan oo kale ah ayaa siin doona taageero aad u fiican Tradescantia, iyo sidoo kale caleemahooda / burooyinkooda, kuwaas oo ku kala duwan midabka iyo qaabka, waxay abuuri karaan waxyaalihii ugu fiicnaa, si fiican u xoojiya faa'iidooyinka shuraakada.
On hore, waxaad qurxin kartaa dhammaan geraniums, iyo darajada sare ee Tradescantia lagu dabaqi karo asalka ah. The duurka ee dhirta this u muuqan doonaa mid aad u jir ahaan u dhow barkadaha beerta, ee dhagaxyada ama, tusaale ahaan, midigta dhexe ee cawska. Tradescantia ayaa sidoo kale lagu kobcin karaa isku-darka, beeraha dhagaxyada, iyo qaababka ubaxyada fudud. Ubaxa waa mid aan ur lahayn, laakiin waa dhir macaan oo aad u fiican, sidaa daraadeed ganacsiyada badan ee aad ku leedahay beerta, aad u badan waxaad soo jiidan kartaa dhicin, kaas oo si weyn u soo jiidan doona muuqaalka quruxda badan.
Beerta Tradescantia jeceshahay meel qoyan oo qoyan, sidaas darteed daryeelka Tradescantia iyo waraabinta waa in si taxaddar leh loo sameeyaa. Xilliga dayrta, waraabinta farsamoyinka ayaa loo baahan yahay in la yareeyo.
Halabuurka ee ciidda for the tradescantia:
ama waxaad dooran kartaa ciidda diyaarka ah oo la diyaariyay oo biyo fiican leh.
Bacriminta oo ku saleysan dhismaha macdanta ayaa la quudin doonaa bisha Maarso. Waa lagama maarmaan in la qaato 10-30 g oo ah bacriminta halkii mitir labajibbaaran, qodaya ciidda qoto dheer oo ah 8 cm. Quudinta ku xigta waa in la sameeyaa laba jeer bishiiba iyadoo la adeegsanayo bacriminta dareeraha ee Kemira. Ka dib markii peduncle ayaa yaraaday, waxaa la saaraa, iyo dhirta waxaa la mulched peat iyo daboolay lapniki.
Calaamadaha ubaxa ee Tradescantia
Tradescantia waxay leedahay ubax qani ku ah, laakiin tayada caruurtana marnaba si aan kala go 'lahayn ayaa loo kala firdhiyaa beerta oo dhan. Galabtii, galabtii, maalin qorrax leh, ama dushiisa, laakiin horeba fiidkii, ubaxyada Tradescantia waxay bilaabaan inay lakabaan oo ay ka baxaan sanduuqooda farahooda, sida snails ee qolkooda. Sidan oo kale, waad ilaalin kartaa qarsoodiga dhalashada ee farcan.
Foomkooda, dabaqyada leh abuur iyo burooyinkeeda aan weli furin, waxay u eg yihiin kooxo waaweyn. Waxay yihiin muruqyo adag, sidaas darteed waa adag tahay in la go'aamiyo "farabadan" gaar ah waxay u rogi doontaa ubax qurux leh leh saddex qoraxda subaxda soo socota. Faa'iidada ugu weyn, sida hore loo soo sheegay, waa ubax dheer oo joogto ah beerta ganacsiga beerta.
Waa muhiim! Fikradda qurxinta waxaa saameeya culeyska dhammaadka xilli-ciyaareedka, haddii aad isku daydo inaad ka saarto kooxaha xayeysiis ah mar kasta.
Markaas caws ubax dhalinyarada leh burooyinkeeda waxaa laga yaabaa inay ka muuqdaan caleemaha xiphoid, iyo farsamoyaqaanada mar kale ayaa si weyn loogu dabooli doonaa ubax leh saddex tufaax ah.
Transplantation iyo dhalmo beerta ganacsiga beerta
Haddii aad dooratay meel gaar ah oo lagu beerayo ubax, ka dibna tani way wanaagsan tahay, tan iyo markaas Tradescantia waxay u kori kartaa wakhti dheer hal goob. The baadiyaha of this warshad leh size size is haysta, sidaas ubaxa ma aha mid ka mid ah gardarada beerta.
Warshadihii hore waxay bilaabeen inay si xun u bararaan, sidaas darteed shan jeer shantii sano ee Tradescantia waa in la kala qaybiyaa oo dib loo noolaado. Waqtiga ugu wanaagsan ee transplanting tradescantia waa guga, marka caleemaha dhalinyarada bilaabaan inay muuqdaan.
Tradescantia waxaa lagu faafiyaa by guntooda stem, abuur, iyo qaybin baadiyaha. Soo-saarista farsamoyaqaannada leh caws ayaa la samayn karaa si aad u fudud. Waa lagama maarmaan in si taxadar leh loo jeexo jirida caleenta caleenka, halkaasoo ay ka sameysan tahay daawada, iyo boogta biyaha ku rid. Gooynta waxay si fudud u qaadataa laba asbuuc.
Si kastaba ha ahaatee, abuurka abuurka ayaa sidoo kale, suuragal ah, si kastaba ha ahaatee, sida dhaqanka ee bannaanka u muujiyaan, sifooyinka noocyada kala duwan ee warshad waa in aan la ilaalin. Tradescantia ayaa sidoo kale la faafiyaa iyadoo loo qaybinayo baadiyaha. Guga, waa in aad baadho baadiyaha oo si tartiib ah u kala qaybisaa dhowr duur oo isku mid ah, isku day inaadan waxyeeleynin xididdada geedka. Waa suurtogal in la kala qaybiyo baadiyaha iyo dhammaadka xagaaga. Sidan, Tradescantia isla markiiba waa la fadhiisan karaa meesha aad u baahan tahay beerta.
Cadaadiska qaboobaha qaboobaha
Tradescantia waa mid u adkaysata qabowga. Si kastaba ha ahaatee, ka hor xilliga qaboobaha, geedka waa in lagu daboolaa caleemo dhacday - tani ma ogolaan doonto ubaxa inay barafoobaan inta lagu jiro cimilada qabow.
La dagaallanka cudurada iyo cayayaanka suurtagalka ah
Waxaa jira waqtiyo marka beeralayda ay ka fekeraan sababta caleemaha u noqdaan jaalaha ah Tradescantia. Si loo go'aamiyo sababta, waxaa lagama maarmaan ah in si joogta ah loo baaro ubaxa, sida caarada iyo qadhaadhka ayaa lagu dari karaa in ay nuugaan dheecaanka geedka, taas oo ugu dhakhsaha badan u keeni doonta geeridiisa. Caleemaha qallalan iyo jaalaha ah waxay la socon karaan qoyaan yar.
Cayayaankaasi wuxuu gaari doonaa 4mm dhererka dhererkiisuna wuxuu u egyahay lakabka yaryar ee ku xiran caleenta hoose ee xididdada. Midabku waa mid aad loo badali karo - hurdi, cas, casaan. Caleemaha waxaa lagu daboolay cidhib, ka dibna huruud isu beddela oo dhaca. Waxa kale oo ka mid ah calaamadaha lagu tirin karo xulashada dhirta caleemaha iyo caleemaha. Cayayaanka ayaa jecel inay cunaan cabitaankaas. Kala soocida garaacista waxaa lagu sameeyaa caawinta maryo qoyan oo leh saabuun ama khamri xal. Haddii dhirtu si xun u xanuunsato, markaa waxaad u baahan tahay inaad daaweyso Carbofos, Fufan ama Aktellik. Haddii siyaabahan aysan ku caawin, waxaad u baahan tahay inaad ka fujiso qaybaha ugu waxyeelleysan ee geedka.
Cayayaanka Tani waxay dhaawici kartaa caleemaha yar yar iyo caleemaha. Calaamadaha ugu muhiimsan - caleemaha waxay bilaabaan in ay burburaan oo ay u dhintaan, caleemaha qudhooda waxay noqdaan kuwo u nugul. Aphid sucks sucks cellular ka soo ubax. Cayayaanka ayaa jecel inay ku degaan burooyinkooda iyo caleemaha, halkaasoo ay ka sameeyaan koox cufan ku wareegsan caleemaha yar yar. Mid ka mid ah calaamadaha waa caleemo qoyan iyo dhibco jaale ah; burooyinkuna way dhacaan. Nidaamyada halganka: ku dhaq saabuunta dharka iyo saabuunta dharka. Haddii dhirtu ay si weyn u xanuunsato, markaa waa in lagu daaweeyaa Malathion ama Actellic.
Wuxuu ku degaa dusha sare ee xaashida ama caleemaha. Waxay leedahay muuqaal filim qani ah. Si kastaba ha noqotee, fangasku maaha khatar, hase yeeshee, muuqaalka muuqaalka filimka geedka, sawiristaha iyo neefsashada ayaa laga yaabaa in la dhibsado, tani waxay keeni doontaa tamarta guud ee ubaxa. Mushroomka si fudud ayaa si fudud looga saari karaa saabuun iyo biyo.
Waxaan siinnaa qaabab caan ah oo cayayaanka ah. Aphids waxaa lagu tuuray by ku buufin tincture ee xididdada la jajabiyey ama caleemaha løvetann cusub. Nidaamka waxaa lagu soo celiyaa toban maalmood, ilaa ay ka dhammaato aphids. Calankooda ayaa laga saari karaa iyadoo la adeegsanayo tincture pyrethrum ama toon.